ဘဏ်တွေမှာ ငွေစုစာအုပ်လုပ်ထားသူများ ယခုအကြောင်းအရာကို မဖြစ်မနေ သတိပြုကြပါ - Myitter
August 31, 2019 Myitter ပြည်တွင်းသတင်း 0
ဘဏ်တွေမှာငွေစုစာအုပ်လေးလုပ်ထားလို့ ငွေသွားထုတ်တဲ့အခါ အဆိုပါဘဏ်မှထုတ်ပေးသောငွေသားကို အရင်မစစ်သင့်ပါဘူး။
ကိုယ့်စာအုပ်က ဘယ်လောက်ထုတ်လို့ ဘယ်လောက်ကျန်ကြောင်း အရင်ဆုံးသေသေချာချာ စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဂဏန်းပေါင်းစက်နဲ့ချတွက်လိုက်တာ ပိုကောင်းပါမယ် (ငွေ amount များတာတို့ ထောင်ဂဏန်း၊ရာဂဏန်းစွန်းတာတို့ဆို ပိုရှုပ်ပါတယ်)
ကျမကိုယ်တွေ့အဖြစ်ပျက်လေးတစ်ခု ဗဟုသုတအနေနဲ့ဝေမျှချင်ပါတယ်။ ယခုရေးတဲ့စာမှာ ဘယ်ဘဏ်မှာဘယ်အချိန် ဘယ်လိုပြသနာတက်ခဲ့ကြောင်းအတိအကျမဖော်ပြတော့ပါ။
ကျမကျေနပ်တဲ့အထိဘဏ်လူကြီးများမှ သေသေချာတောင်းပန်ခဲ့လို့ပါ။ ဆိုလိုရင်းကတော့ ဘဏ်သွားမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကလုပ်ရမယ့်အလုပ်က
Check ,Recheck,Counter check ပါ။
Check = စစ်ဆေးမယ်
Recheck = ပြန်စစ်ဆေးမယ်
Counter check = ထပ်မံစစ်ဆေးမယ်
ဘဏ်မှာကျမငွေသွားထုတ်တဲ့တစ်နေ့ ဘဏ်စာအုပ်ထဲကထုတ်မှာဖြစ်လိုိ့ ကျမရဲ့ ဝသီလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ ငွေနည်းနည်းပဲထုတ်ထုတ်၊ များများပဲထုတ်ထုတ် အိမ်ကနေမထွက်ခင်ကတည်းက ဘဏ်စာအုပ်ထဲကလက်ရှိအရည်အတွက်နဲ့ထုတ်မယ့်အရည်အတွက် လက်ကျန်အရည်အတွက်ကို ဂဏန်းပေါင်းစက်နဲ့သေချာချတွက်တယ်
တွက်ပြီးသားစာရွက်လေးကိုယူပြီးမှ ဘဏ်ကိုသွားပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့အလုပ်အရမ်းများတဲ့နေ့မို့ ရှိုးတွေစမိုးတွေမလုပ်အားပဲတော်သင့်ရုံလေးဝတ်စားပြီးအိမ်ကထွက်ပါတယ်။
ဘဏ်ရောက်တော့ လကုန်ရက်မို့လူတွေကကျိတ်ကျိတ်တိုး အလကားများဝေနေသလား အောက်မေ့ရတယ်။
စိတ်ထဲတော့မလုံ ငါ့နဲ့ဒီလိုနေ့မျိုးမှ အဝတ်အစားနွမ်းဖတ်ဖတ်ဝတ်ခဲ့မိတယ်ပေါ့။လူမှာအဝတ် တောင်းမှာအကွတ်လေ လူရိုသေ ရှင်ရိုသေလေးတော့ ဝတ်စားခဲ့ရမှာလို့တွေးမိသား။
ဒါနဲ့ကျမငွေထုတ်အလှည့်ရောက်ချိန်မှာ မိုက်ကြီးနဲ့ကျမရဲ့ရှည်လျားတဲ့ နာမည်ကြီးအော်ခေါ်တော့ ဘတ်သီဘတ်သီနဲ့သွားတာပေါ့။
ကောင်တာရောက်တော့ နာမည်မေး၊မှတ်ပုံတင်စစ်ဘာညာရေးခြစ်၊ လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်။
အားလုံးအိုကေလို့ထိုးပေးလိုက်တယ်။ ထုတ်တဲ့ငွေသား တစ်သိန်းတိတိထုတ်ပေးပါတယ်။
ပြီးတော့ငွေစုစာအုပ်လေး ပြန်ပေးပါတယ်။ ယူမယ့်ပိုက်ဆံထက် စာအုပ်ကိုအရင်စစ်တာပါ။မှားနေတယ်။ အိမ်ကတွက်ချက်ပြီးယူလာတဲ့စာရွက်လေး ပြန်ထုတ်ကြည့်တယ်။ သေချာတယ် မှားနေတယ်။ဘဏ်ဝန်ထမ်း ကောင်လေးကိုခေါ်တယ်။
ဒီက ငွေသားတစ်သိန်းတည်းထုတ်တဲ့ မျက်နှာမွဲအဝတ်အစားမွဲတဲတဲနဲ့ အမျိုးသမီးကို လှည့်ကိုမကြည့် (အလုပ်အရမ်းရှုပ်တဲ့နေ့မို့ပါလေလို့ နားလည်ပေးပါတယ်)
ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ပြဿနာကိုတော့ဒီအတိုင်းထားလို့မှ မရတာ။ဆက်ခေါ်တယ်။ ကြားရက်နဲ့မကြားချင်ယောင်ဆောင်တယ်။သိတယ်။ထပ်ခေါ်တယ်။
သူထုတ်ပေးတဲ့ငွေသားအုပ်ကို ကောင်တာပေါ်တင်ထားရက် လုံးဝမထိသေးဘူး (cctv တွေနေရာအနှံ့တက်ထားတာပဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုအပြည့်)။
နောက်ဆုံး စိတ်မရှည်တဲ့အမူအယာ၊ လေသံနဲ့ လာမေးတယ်။ ဘာအခက်အခဲရှိလဲ?
(ဪ….ပြောနေကြ service အသံ ”ဗျ “ဆိုတာလေးတောင်မပါတော့ဘူး)
” မောင်လေးရေ အစ်မစာအုပ်လေးသေချာပြန်စစ်ပေးပါ။ ”
” အစ်မထုတ်တဲ့ငွေရပြီမလား? ”
” မဟုတ်သေးဘူး။အစ်မစာအုပ်မှာ မှားနေတယ်။ပြန်စစ်ပေးပါ။ ”
“ဟုတ်ကဲ့ ထားခဲ့လိုက်ပါ” (စိတ်မရှည်တဲ့လေသံနဲ့..ပြောချင်တာက သိန်းပေါင်းထောင်ချီထုတ်တဲ့မျက်နှာကြီးတွေ VVIPတွေနဲ့သူအလုပ်အရမ်းရှုပ်နေတယ်ပေါ့)
အဲ့တော့ ကျမက “ဒီထုတ်ပေးထားတဲ့ငွေကို ပိုက်ဆံအိတ်ထဲထည့်ပြီးစောင့်ရမှာလား?
စိတ်ကတော့သိပ်မရှည်ချင်တော့။ လူတွေကလည်း ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်နဲ့ကြည့်ကုန်ပြီ သူ့မျက်နှာဘေးကလည်း လူကိုအထင်သေးအမြင်သေးနဲ့လုပ်နေတယ်။
” ဟေ့ ”
” ဒီကိုလာစစ်ပေး..အရှေ့က customer ကိစ္စမပြတ်ပဲနင်ကတခြား customer ကိုလုပ်ပေးတာဘာလဲ? ငါလည်းငါ့အလုပ်နဲ့ငါရှိတယ် ”
ကိုယ်တော်က မခြေမငံမျက်နှာဘေးနဲ့စာအုပ်ကိုလာယူသွားတယ်။ကွန်ပြူတာထိုင်ခုံကို စောင်ကြီးအောင့်ကြီးနဲ့လုပ်လိုက်သေး။ ကွန်ပြူတာမှာစာအုပ်ကိုတိုက်စစ်တယ်။
ပေါ်ပြီလေ သောက်သုံးမကျတာတွေ။ ကျမထုတ်တာငွေသားတစ်သိန်းတည်း။ စာအုပ်ထဲက ထွက်သွားတာက သုံးသိန်းတောင်။ စိတ်ထဲကနေပြောလိုက်ပါတယ်။ (ငါလိုလူနဲ့မှတိုးရတယ်လို့)
သူမျက်နှာတွေပျက်နေပြီ။ သိနေတယ်လေ သိနေတယ်။
လူတွေဘယ်လောက်ဝိုင်းကြည့်ြ်ကည့် ကျမငွေသားဘယ်လောက်နည်းနည်းလေး ထုတ်လည်းမရှက်ပါဘူး။
ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စား ကိုယ့်ခြေပေါ်ကိုယ်ရပ်တာ။ တစ်ကျပ်လည်းငွေနှစ်ကျပ်လည်းငွေပဲ။
“ဟာ..အစ်မ ဟုတ်တယ်ဗျ ( service လေသံ “ဗျ”ဆိုတာ ဘယ်ဂျောင်က ရောက်လာတာတုန်း? )
“နေပါဦး.. မင်းတို့ဘဏ်ကိုအသုံးပြုပြီးလစဉ်ငွေလွှဲလာတာနှစ်နှစ်ကျော်ပြီ်စိတ်ချယုံကြည်လို့လေ အခုကြည့်ပါဦး ဒီစာအုပ်ကိုငါသာမစစ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
ဘဏ်ထဲကနေငွေယူပြီး ထွက်သွားပြီးမှပြန်လာမေးရင်ကော မင်းဘယ်လိုဆက်ဆံမလဲ?
မင်းစောစောကငါ့ကိုပြုမူတာပြောဆိုပုံတွေ cctvကိုပြန်ကြည့်။ဘယ်မှာလဲ bank manager?”
လူတွေဝိုင်းကြည့်ကြတယ် (ရှက်လည်းရှက်ပါတယ် ရှက်လည်းမရှက်ပါဘူး) ကိုယ်ကမှန်နေတာ သူကမှားတဲ့အပြင်မခြေမငံလုပ်လို့ပါ။
ချက်ခြင်းဆိုသလို ဘဏ်အပေါ်ထပ်က တိုက်ပုံအကျီနဲ့ဘဏ်လူကြီးအပြေးဆင်းလာတယ်။သူ့နောက်ကလည်း ဘာရာထူးအဆင့်လူတွေလဲမသိ။
ဝိုင်းကြည့်နေတဲ့လူတွေလည်း သိသွားရအောင်ဗဟုသုတလည်း ရသွားအောင် ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ပြောပြ ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။
ချက်ခြင်းဆိုသလို အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘဏ်ဝန်ထမ်းတချို့ ခါးလေးကိုင်းပြီးအနူးအညွတ် တောင်းပန်စကားပြောကြရှာပါတယ်။
စောစောက မချေမငံလုပ်တဲ့ မောင်မင်းကြီးသားလေးမှာလည်း မျက်နှာကဇီးရွက်လောက်နဲ့ တောင်းပန်ရှာတယ်။ ကျမစာအုပ်လေးကို အသေချာစာတွေဖျက်ပြီး ပြန်ရိုက်ပေးပါတယ်။
“ဟုတ်ကဲ့… ဒီလောက်ဆိုရင်ကျေနပ်ပါတယ်” (ကိုယ့်ပြသနာတစ်ခုအတွက် သူများထမင်းအိုးရိုက်ခွဲလောက်အောင်အောက်တန်းမကျပါဘူး)
အိမ်ပြန်မယ့်ကျမကို သေသေချာထပ်မံတောင်းပန်ခဲ့လို့ ကျေနပ်ပါတယ်။ လူဆိုတာအမှားနဲ့မကင်းဘူးလေ။
ပြောချင်တာကတော့ ဘဏ်သွားရင်ငွေပဲထုတ်ထုတ်၊ငွေပဲလွှဲလွှဲ ဘဏ်ဝန်ထမ်းကိုပဲအားမကိုးပါနဲ့။ ကိုယ့်စည်းစိမ်ကို ကိုသာထိန်းသိမ်းနိုင်မှာပါ။ ဘဏ်ဝန်ထမ်းက ယခုလိုစာရိုက်မှားပုံမျိုးနဲ့ဆို ” သုံည “တစ်လုံးသာကျန်နေခဲ့ရင် ရှင်းလိုက်ရမယ့်ဇယားတွေပိုများမယ်မဟုတ်လား။
Check = စစ်ဆေးမယ်
Recheck = ပြန်စစ်ဆေးမယ်
ဗဟုသုတအနေနဲ့ဝေမျှပါတယ်။ မိတ်ဆွေအပေါင်း စီးပွားဥစ္စာဒီရေအလားတိုးတက်ကြပါစေ။ စုနိုင်ဆောင်းနိုင်ကြပါစေ။ မရရှိသေးသောစည်းစိမ်တွေပိုမိုရရှိကာ ရှိပြီးသားစည်းစိမ်တွေလည်းတည်မြဲကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းပို့သအပ်ပါတယ်ရှင်
Ref – Dahlia Ohn Thwin
ကြည့်မိသူတိုင်းကို မျက်ရည်ကျစေတဲ့ “၀င်း နှင့် ဇော် အတွက် ကမ္ဘာမကျေဘူး ” ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးပါ……